အပြင်ဘက်တွင် LED ရေစိုခံနိုင်သည့်မျက်နှာပြင်သည်စွမ်းအင်ချွေတာသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
ပြင်ပကြော်ငြာရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုကြော်ငြာများနှင့်ပြင်ပမှလှုပ်ရှားတက်ကြွသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုလိုအပ်လာသည်. ဤရွေ့ကားရိုးရာ inkjet ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များအားဖြင့်အောင်မြင်ကြသည်မဟုတ်. လက်ရှိအချိန်မှာ, ပြင်ပ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်များသာဤလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအောင်မြင်နိုင်သည်.
နှစ်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံ၏ပြင်ပ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် 16.7 ဘီလီယံကီလိုဝပ်နာရီ, အရာအကြောင်းကိုသုံးမြစ်ရေကာတာ၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ညီမျှသည် 60 ရက်ပေါင်း, ညီမျှသည် 8.5 ကုန်ကြမ်းကျောက်မီးသွေးသုံးစွဲမှုတန်ချိန်သန်း, နီးပါး 17 ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတန်ချိန်သန်း.
၎င်းသည်ပြင်ပ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်များမှလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဖန်တီးထားသည့်တန်ဖိုးကိုအပြည့်အဝထင်ဟပ်စေသည်, ပြင်ပ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်အသုံးပြုမှုလမ်းကြောင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်.
ထို့ကြောင့်, ပြင်ပ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ပါဝါတွေအများကြီးစားသော်လည်း, ငါတို့အဲဒါကိုမသုံးနိုင်ဘူး, ငါတို့သာပါဝါကိုကယ်တင်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
ဒီတော့, ဘယ်လိုလုပ် ပြင်ပကုမ္ပဏီကြီးအီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင် LED လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုချွေတာပါ? gave the following suggestions:
1. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် LED ကိုအသုံးပြုခြင်း, အလင်းထုတ်လွှတ်သော chip သည်ထောင့်များကိုမဖြတ်ပါ;
2. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော switching power supply ကိုအသုံးပြုခြင်း, အလွန်ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုကိုတိုးတက်အောင်;
4. Internal Circuit ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန်သိပ္ပံနည်းကျခြုံငုံသော circuit အစီအစဉ်တစ်ခုရေးဆွဲပါ;
5. ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အညီအပြင်ဘက်တွင် LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏အရောင်ကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိပါ.
အထက်ပါအစီအမံမှတဆင့်, ပြင်ပ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုများစွာလျှော့ချနိုင်သည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အပူထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းခြင်းတို့သည်ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက်အပြင်ဘက် LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်များ၏အလင်းယိုယွင်းမှုကိုဖြစ်စေသည်.